ချောက်၍ခြိမ်းသော စာ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ချောက်၍ခြိမ်းသော စာ..
Posted by kai on Jul 22, 2010 in Critic, Gossip, Rumor, News |7comments
မြန်မာပြည်က မိတ်ဆွေတယောက်က အီးမေလ်းနဲ့ပို့ လိုက်တာပါ။ စာက ရှည်သမို့ The Voice ဂျာနယ်ကို တောင်းဆိုထားတာတွေရယ်။ အိပ်ဖွင့်စာကို မိတ္ထုကိုပို့တဲ့ လူ၊ဌာနစာရင်းပါတဲ့ စာမျက်နှာရယ်ပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီစာက ၂၀၀၇ ကအဖြစ်အပျက်ကိုညွှန်းထားတာဆိုတော့ မဖတ်ဖူးသူတွေအဖို့ ဘာကိုဆိုလိုချင်နေမှန်းသေချာမသိရပေမဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ စာပေစိစစ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတချို့ ကတော့ စာသက်သေနဲ့တကွ ကျန်ရစ်တယ် မြင်မိပါတယ်။
ဆောင်းပါးတစောင်ကိုပို့ရာမှာ စာမျက်နှာ(၄)မှာရေးသားချက်အရ..“ လုပ်ငန်းသဘောအရ ယင်းစာမူကို ၀န်ကြီးရုံးက ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးထံသို့ ပို့ရကြောင်း။ ထိုမှ စာပေစိစစ်ရေးသို့ပို့ ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်” ဆိုထားပါတယ်။ ပြောတဲ့သူက (အဲဒီတုံးက)သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းရဲ့ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဖြစ်ပါသတဲ့..။ ၀န်ကြီးရုံအပါအ၀င်ဌာန၃ခုအနည်းဆုံးပါဝင်ပါတ်သက်နေတာ တွေ့ရပါမယ်။
ဒီတော့ စာပေစိစစ်ရေးဆိုတာက လူတွေသာမန်အမြင်ထဲမှာ …လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဝေခွင့်ကို ပိတ်ဆို့ ရိုက်ဖျက်နေတဲ့ စာပေကင်ပေတိုင်ဌာနကြီး ဖြစ်နေပေမဲ့ အဲဒါကြီးအပေါ်မှာ ဘယ်ဌာနတွေ၊ ဘယ်သူတွေ ရှိနေ၊ ကိုင်တွယ်နေသလဲ မြင်တွေ့လိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါလေးပါပဲ။
တော်ကြာ… ငါးမင်းဆွေ က…ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပါ ကုလသမဂ္ဂနဲ့၊ အမေရိကန်သမ္မတဆီ တိုင်စာပို့ပြီး ပိတ်ဆို့ခိုင်းနေဦးမှာစိုးသမို့ …ဒီလောက်ပဲပြောပါရစေနော…။
စာမျက်နှာ ၄ ကို ဘာဖြစ်လို့ မတင်ပေးတာတုန်းဗျ။
နောက်ခံ အကျဉ်းလောက်တော့ ပြောသင့်တာပေါ့။
ငါးမင်းဆွေ ဆောင်းပါးကို ၀န်ကြီး လမ်းကြောင်းက နေ voice ကိုထည့်ခိုင်းတာ မထည့်ပေးလို့ တင်းနေတာလား ?
နည်းနည်းလောက်တော့ ရှင်းပါ၊ ဒါမှမဟုတ် စာအပြည့်အစုံတင်ပေးပါ။
……အော်..ငါးမင်းဆွေ ….ငါးမင်းဆွေ..တကယ်တော့ ….မင်းဟာဆိတ်ဟိုဟာမင်းဆွေပါ …..
အေးကွ။ အဲဒီအကောင်က ငွေပေးပြီးလုပ်ခိုင်းမှာမို့ ဂျာနယ်တိုက်ရှေ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးတွေဆန်ဒပြရင်စစ်အစိုးရဘာလုပ်မလဲ သိချင်သား
Kai, you didagood job & you are the great whistle blower !!!
But, too bad you didn’t post all pages, as posted date is also important.
Anyway, Is there any possibility,
anybody can post ( in this web site ) ” Myanmar Pyi Thar, Thu Htay thar Larr ” article
& any consequences, if any ?
ရူးပါ့(ဖါးမင်းဆွေ)ရယ် မင်းဆောင်းပါတွေမတွေ့တော့လို့သေသွားပြီမှတ်နေတာ ခုတကျော့ပြန်ခွေးရူးလါပြန်ပြမနေပါနဲ့ မင်းသတ္တိရှိယင် ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံယင် အင်တာနက်ကနေ မင်းဆောင်းပါးတွေကိုတင်လိုက်ပါလါး? ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
Fish Min Swe is an asshole !